Sajhasabal.com | Homeगत आर्थिक वर्ष कुन म्यानपावरले कति कामदार पठाए ? (१०८१ म्यानपावरको सूची सहित)
अनिल अधिकारी | साउन १, काठमाडौँ | गत आर्थिक बर्ष म्यानपावरहरुका लागि निकै सकसपूर्ण बर्ष बन्यो । मलेसिया बन्द भएका कारण कतिपय म्यानपावर व्यवसायीहरु बेरोजगार जस्तै बने भने कतिपय म्यानपावरहरु बन्द गर्ने स्थातीमा पुगे । बिभिन्न समस्याको बाबजुद पनि गत बर्षमा नेपालका १०८१ वटा म्यानपावर कम्पनीले २ लाख ८ हजार ३५२ जना कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा महिलाको शंख्या १७ हजार ३५२ जना रहेका छन् ।
गत आर्थिक बर्षमा १०० भन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरको सूचीमा ५१८ म्यानपावरको नाम रहेका छन् । त्यस्तै १००० भन्दा बढी कामदार पठाउने २७ वटा मात्र म्यानपावर रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन सफल म्यानपावरको सूचीमा सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा द रिभर ओभरसीस रहेको छ । उसले गत आर्थिक बर्षमा ४४२७ पुरुष र ८३१ महिला गरि कुल ५२५८ जना नेपाली कामदारलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउन अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा यो म्यानपावरनै पहिलो नम्बरमा थियो । उसले त्यो आर्थिक बर्षमा कुल ५८०४ कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको थियो ।
त्यस्तै दोश्रो नम्बरमा एसओएस म्यानपावरको नाम छ, उसले गत आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ४१७१ पुरुष र ११० जना महिला गरि कुल ४२८१ जना कामदारलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउन अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको छ । आर्थी बर्ष २०७४/७५ मा यो म्यानपावरले कुल ५४७२ कामदार पठाउन अन्तिम स्वीकृति लिएको थियो ।
त्यस्तै प्याराडाइज इन्टरनेशनल तेश्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ । उसले २७०७ पुरुष र ६२० महिला कामदारलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउनको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको देखिएको छ ।
त्यस्तै भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसीस सर्वाधिक कामदार पठाउने म्यानपावरहरुको सूचिको चौथो नम्बरमा परेको छ । उसले गत आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा २३६० जना कामदारलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउनको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको छ । भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसीसले १८७७ पुरुष र ४८३ महिला कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको छ ।
त्यस्तै अन्जली ओभरसीस सर्भिस पाँचौं नम्बरमा पर्न सफल भएको छ । अन्जलीले गत आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा मात्र २११९ जनाको अन्तिम श्रमस्वीकृति लिएको छ जसमा महिलाको शंख्या ५३ जना छन् भने बाँकी पुरुष रहेका छन् ।
त्यसपछि सर्वाधिक कामदार पठाउने मुख्य २० म्यानपावरको सूचीमा क्रमश सान नेपाल , नौकिरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिस, साउण्डलाइन रिक्रुटमेन्ट, अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल, स्वीफ्ट गोर्खा इन्टरनेशनल, अल स्किल इन्टरनेशनल ह्युमन रिसोर्स, कोशी इन्टर्नेशनल सर्भिस, अल-आशमाक्स कम्पनी, प्रुडेनसियल ओभरसिज, ट्यालेन्ट ओभरसीस सर्भिस, शिखर इन्टरनेशनल म्यानपावर सर्भिस, वाहा म्यानपावर सप्लायर्स, देवान कन्सलट्यान्स, भ्रिन्दित सर्भिस (इगल हन्टर इन्टरनेशनल) र लिंक इन्टरनेशनल प्लेसमेन्ट (नाइल ओभरसीस) रहेका छन् । यी बाहेक बाँकी ७ म्यानपावरले मात्र गत आर्थिक बर्षमा १००० भन्दा बढी कामदार पठाउन सफल भएका छन् । जसमा २१ औं नम्बरबाट क्रमश लाइफलाइन ओभरसीस, अन्जुलिमा इन्टरनेशनल, दुबई ओभरसीस इन्टर नेशनल, जब सिकर म्यानपावर, नेपाल एचआर सोलुसन, सुफी इन्टरनेसनल सर्भिस र सत्यम इन्टरनेसनल सर्भिस रहेका छन् । माथिका बाहेक अन्य १०५४ म्यानपावरले १००० भन्दा कम कामदार पठाउनेको सूचीमा रहेको साझा सबाल मिडियाले जानकारी पाएको छ ।
बैदेशिक रोजगार बिभागले हरेक आर्थिक बर्ष साउन १ गतेदेखि असार मसान्तसम्म बैदेशिक रोजगारमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेहरुको सूची सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक बर्ष मलेसिया जाने कामदार ह्वात्तै घटेको कारण मलेसियालाई आधार बनाएर बैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्रिय म्यानपावर कम्पनीहरु भने निकै पछाडी परेका छन् ।
सबैभन्दा बढी महिला कामदार पठाउने म्यानपावर कुन कुन ?
आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी महिला कामदार पठाउने म्यानपावरको टप-५ को सूचीमा क्रमश: रिभर ओभरसीस (८३१ जना), एससीसी म्यानपावर (७२२ जना), प्याराडाइज इन्टरनेशनल (६२० जना), भ्रिन्दित सर्भिस (इगल हन्टर इन्टरनेशनल) ५०२ जना र भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसिस (४८३ जना) रहेका छन् ।
गत बर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी महिला कामदार पठाउने म्यानपावरको सूचीमा पहिलो नम्बरमा राजधानीको कमलपोखरीस्थित एससीसी म्यानपावर (११८८ जना) रहेको थियो । त्यस्तै दोश्रो नम्बरमा कोशी इन्टरनेशनल (८१४ जना) रहेको थियो । यो बर्ष कोशीले २१३ जना महिलाको मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ ।
बैदेशिक रोजगार बिभागले सार्वजनिक गरे अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा कुन म्यानपावरले कति कामदार पठाए ? क्रम अनुसार ५०/५० म्यानपावरको सूची तल क्लिक गरि हेर्न सक्नुहुनेछ:
TOP-50 Manpower List हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् >> http://sajhajobs.com/news/223
TOP-51 to 200 Manpower List हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् >> http://sajhajobs.com/news/224
TOP-201 to 500 Manpower List हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् >> http://sajhajobs.com/news/225
TOP-501 to 1081 Manpower List हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् >> http://sajhajobs.com/news/226